Mhlawumbe into esabekayo kakhulu kuwo wonke umuntu isizungu. Kodwa ungaba nesizungu futhi uhaqwe izihlobo nabangane, uma ungayitholi enye ingxenye, ubani ongakwazi ukuqonda kunoma yisiphi isimo futhi wabelane ngazo zonke izinsizi nezinjabulo. Ngokufanayo, isigamu sobulili obuhlukile.
Kusukela ezikhathini zasendulo ngenxa yabesifazane, amadoda avule izimpi, afuna ukunqoba amazwe amasha nezintambo, abesifazane, futhi, bekulindeleke ngokwethembeka, bakhulise izingane. Ukukhanga phakathi kwabantu ababili bobulili obuhlukile kuvame ukubizwa ngokuthi uthando, hhayi uthando, hhayi uthando noma umkhuba, okuwukuthi uthando. Ngakho luyini uthando phakathi kwendoda nowesifazane?
Lo mbuzo usuqede isikhathi eside izingqondo zabaningi. Uma uthembele kuphela kwimingcele yemvelo: ukuvumelana noma ngokuphambene nalokho, ubukhazikhazi befomu, ubuhle besimo, ngokuvamile kuthiwa ukukhanga, ukufutheka. Kusobala ukuthi indoda eyibona idlula intombazane enombukiso omuhle, inomusa ukumbona endleleni. Noma owesifazane, lapho ebona umuntu ohloniphekile, onomusa, ozoziqhenya, uzolungisa amahlombe akhe bese ezama ukuheha ukunakekelwa nge-glance. Kodwa lokhu kwenzeka nsukuzonke amakhulu ezinkulungwane zezikhathi, kanti ukumamatheka okulula akuvusi uthando phakathi kwendoda nowesifazane, ukudlala ngothando. Ngakho-ke, kuphela ekukhangeni ngokomzimba okunjalo umuzwa onzulu awukwazi ukusekelwa.
Ake sizame ukucabangela ukuxhumana. Ake sithi indoda nowesifazane, hhayi izihlobo, bavame ukuxhumana, bebize, bahlangabezane, bahambe noma basebenze ndawonye, ​​futhi baqonde kahle kakhulu, bayajabula futhi bekhululekile. Kuvela, bayayithanda? Yebo, mhlawumbe bayakwenza, kodwa njengomngane ongazikhulula kuzo ezikhathazayo futhi uziphazamise. Futhi ukuhlala ndawonye, ​​ukwabelana itafula elilodwa nombhede kubo akunakwenzeka. Ngakho-ke, nalokhu akukwazi ukubizwa ngokuthi uthando lwabesilisa obuhlukile, kodwa kunobungane. Nakuba abesifazane abaningi baziqhenya kakhulu ngabangane babo besilisa futhi bayakwazisa lobu buhlobo, ukushada kuyinto engavamile kakhulu. Kuyinto elula futhi ekhululekile ukuba nemvelo yakho ibe ngumvikeli kanye nehlombe eliqinile, ngaphandle kokuzibophezela ngezithembiso ezithembisiwe zokuthembeka. Kodwa yini eyenza indoda nowesifazane bakha umndeni noma nje bathandane isikhathi eside? Phela, kunabantu emhlabeni abaye bahlala ndawonye amashumi eminyaka futhi baye babonisa inhlonipho, ukunakekelwa kanye nobubele kuzo zonke izimpilo zabo. Kuyinto enhle ukubuka abantu abathandekayo, asebekhulile abakhathazekile ngomunye nomunye, kungakhathaliseki ukuthi bahlala ndawonye ndawonye. Iyini imfihlo yalesi simangaliso esingavamile futhi kungani imibhangqwana embalwa kangaka igcina lokhu kuphazamiseka nokushesha kubudlelwano?
Impendulo ilula. Lokhu kubizwa ngokuthi uthando lwangempela phakathi kwendoda nowesifazane. Kodwa, ukulalela ukuhlangenwe nakho okuhlakaniphile kokuphila kwabantu, uqala ukuqonda ukuthi kunzima kanjani lo msebenzi oyinkimbinkimbi, okudinga umsebenzi wansuku zonke nokunakekelwa, nokuthi unzima kangakanani. Uthando lufana nembali yethenda, ehlonishwayo futhi ehlonishwayo, futhi zonke izinyathelo ezingalungile ziyakwazi ukuzibhubhisa. Omunye uthi uthando ngumakhemikhali. Kodwa lokhu kungakhulunywa kuphela ngumuntu ophikisayo noma ongazange amthande ngempela. Akuyona ize, kuthiwa yingxenye yesibili, okuwukuthi, owodwa wesibili yonke. Yiqiniso, uthando lomuntu nowesifazane luyabonakala ngezindlela ezahlukene: owesifazane, kunalokho ekukhanyeni okuthandana naye, futhi indoda iyadumisa kakhulu. Kodwa lo mthombo uhlala owodwa - isidingo esiphuthumayo sokuba ndawonye. Ukufingqa lezi zimpikiswano, singaphetha ngokuthi uthando phakathi kwendoda nowesifazane akusilo olulodwa umuzwa othize, kodwa isethi yemizwelo enamandla kakhulu egijima phakathi komunye isikhathi eside.
Ngeshwa, uthando lubuye ithalente iNkosi enganikezanga wonke umuntu, ngaphandle kwalokho imindeni ngeke ihlukane, futhi bekungeke kube khona isahlukaniso. Kodwa into eyodwa iqinisekile - kunjalo. Ukuhlangana okokuqala abantu, banikezwe kuqala ngemininingwane yangokwenyama, ngephunga, bese kufika isiteji sokuxhumana, futhi baqala ukuqaphela nokuhlaziya izici zesici. Ukuphelele kweziphetho zezigaba ezimbili zokuqala kunikeza ukuthuthukiswa noma ukuyeka ubuhlobo, ngakho uthando aluvuki. Inkolelo yokuthi imizwa ingase ibe yinto yokuzimela, ekuboneni kuqala, iyakhohlisayo. Umuntu angayithandana kanjani nomuntu ngaphandle kokwazi okusemqoka? Njengoba nje esithombeni esihle? Ukubambisana okunjalo ngokuqinisekile kuyobe kuphila isikhathi esifushane, futhi uthando lwayo luwukuhlambalaza nje. Kukhona okungafani, kepha kunalokho okukhethekile kunomthetho.
Ngakho-ke, uthando phakathi kwendoda nowesifazane yi-polyhedron, izinhlangothi zazo ezibizwa ngokuthi: ukukhanga, isifiso, ubungane, ukunakekelwa, ukuqonda, inhlonipho, ikhono lokuzwa nokuzwa umphefumulo wakho womshado, ukwethembeka nobuqotho. Wonke umuntu uzokwazi ukwengeza ubuso bawo kulolu hlu, kodwa noma ngabe yini ebekiwe, into esemqoka ukuthi kufanele ibe. Ukuphakamisa isiko lokuxhumana kanye nokudla okwenziwe ebuhlotsheni, kunamandla okuba yinyunyana yendoda nowesifazane, futhi uthando olude luzophila. Yebo, impendulo yombuzo: "Uyini uthando phakathi kwabesilisa nabesifazane?" Kwavela ukuthi akucacile futhi ayicacisi, kodwa umuntu angaphendula: kungani ethanda umuntu? ..
Ukuthandana kwe-intanethi - ingabe bayathembisa?
Ubuhlobo nomuntu oshadile
Angikwazi ukukhohlwa umfana. Yini okufanele ngiyenze?
Yini okufanele uyenze kumfana akashiyanga?
Kubalulekile ngocansi kunoma yimuphi umuntu
Ingulube yengulube negalikhi
I-Gel isilwane sekhanda
Isaladi nge-porcini amakhowe
Ikhekhe lebhayisikili ne "Bird Milk"
Ungamhlophe kanjani amazinyo akho?
Amaski asekhaya asebenzayo ekukhuleni kwezinwele okusheshayo
Yini okudingeka ukwazi mayelana nama-antibiotics?
Yini okufanele ibe imenyu ekahle kumuntu wemifino?
Ukuxhumana njalo: i-smartphone "yephakade" evela ku-Oukitel
Okubomvu nokumnyama: iqoqo lezenzeko i-Dolce ne-Gabbana Night Baroque Night